Misy olona milaza ho tompony ankehitriny ary misy sahy miteny mihitsy fa manana taratasy raha ny fokontany tamin’izany fotoana no fantatra fa nividy mivantana ny tany tamin’ilay tena tompony tamin’ny taona 1984. Mirefy 24 ara sy 75 sa io tany io ary kasain’ny fokontany hananganana sekoly ho an’ireo zanaky ny sahirana, hitadiavana famatsiam-bola amin’ireo malala-tanana. Nivadika tanteraka anefa ny tantara ankehitriny. Na izany aza anefa dia maro ireo vavolombelona vonona hiaro ity tanin’ny fokontany ao Anosibe Andrefana I toy ireo raiamandreny tamin’izany fotoana, mbola velon’aina…. Manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana ny sefom-pokontany Randrianiaina Teloson, mba hijery akaiky ny zava-misy. Amin’izy ireo mantsy dia misy ambadika sy kolikoly ity fakana ny tanin’ny fokontany ity nefa tokony hanasoavana ny vahoaka.